इराकमा नेपाली युवती २ हजार डलरमा ‘किनबेच’ : दूतावासमै दलालको सेटिङ
March 1, 2019 खबर खुराकLeaveaComment on इराकमा नेपाली युवती २ हजार डलरमा ‘किनबेच’ : दूतावासमै दलालको सेटिङ
काठमाडौं, १७ फागुन । इराकमा २ हजार डलरमा नेपाली युवती ‘किनबेच’ हुने गरेको खुलेको छ । नेपाली युवती इराक लगेर बिक्री गर्ने दम्पतीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेपछि घटना बाहिरिएको हो ।
दूतावासबाट एनओसी लिएरै उडेका कतिपय महिला इराकमा बेचिएका छ्न । भारतबाट दुबई लैजाने र त्यहाँबाट सजिलै इराक पुर्‍याउने गरिएको छ । पछिल्लो समय एनओसीमा दूतावासले कडाइ गरेपछि भारतबाट म्यानमार हुँदै मध्यपूर्वी एसियामा लैजाने गरिएको सिआइबीले जनाएको छ ।
Tagged इराकमा नेपाली युवती २ हजार डलरमा ‘किनबेच’ : दूतावासमै दलालको सेटिङ दूतावासमै दलालको सेटिङ
मौसम आज खुले पनि शनिबारदेखि पुनः वर्षा सुरु हुने
सबै शव काठमाडौंमा, आज राष्ट्रिय सम्मानसहित बिदाइ
सरकारले तोक्यो नयाँ सवारी भाडादर, कहाँबाट कहाँ पुग्न कति भाडा ? हेर्नुहाेस
बोक्सी आरोपमा कुटिएकी लिराको किन भएन मुद्दा दर्ता ?
November 21, 2018 खबर खुराक